» मेरो लागि चलचित्रको गुणस्तर संख्याभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ : तापसी पन्नु
२२ पुष २०७७, बुधबार ०६:२०
हलमा खासै चल्न नपाएपनि ‘थप्पड’ समीक्षकदेखि हरेक दर्शकको मन, मस्तिष्कमा बस्न सफल चलचित्र बन्यो । अभिनेत्री तापसी पन्नु यो महामारीको बन्दाबन्दीका बीच पनि ‘थप्पड’का कारण चर्चामा रहिन् । जीवन्त अभिनय, फरक–फरक भूमिका र त्यसलाई न्यायपूर्वक निभाउन सक्ने खुबीका कारण तापसीलाई चिनिन्छ । उनी अनिश्चित भविष्यबारे चिन्ता लिनुभन्दा वर्तमानमा रमाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छिन् ।
वर्ष २०२० निःसन्देह हामीले देखेको सबैभन्दा खराब वर्ष हो, तपाईंको यो वर्ष कस्तो रह्यो ?
पक्कै पनि वर्ष २०२० हाम्रो लागि सबैभन्दा खराब वर्ष रहयो । यो विश्वव्यापीरुपमा सत्य थियो । त्यसबाहेक यो पनि सत्य हो कि हामीले यस वर्ष बाँच्न सक्नु भनेकै सकारात्मक महसुस गर्नु हो । योभन्दा पनि खराब हुनसक्थ्यो । तर, त्यसो भएन । त्यसैले म यस वर्षलाई आधा भरिएको गिलासको रुपमा हेर्छु ।
यस वर्ष मैले सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेकै वर्तमानलाई महत्व दिनु हो । भविष्यका लागि योजना बनाउनुको सट्टा हामीले उपहारको रुपमा पाएको हरेक पल बाँच्नु हो । किनभने, तपाईंले भविष्यका लागि जतिसुकै योजना बनाएपनि भविष्य अनिश्चित छ । त्यसैले यस पलमा तपाईं आफ्नो जिन्दगी पूर्णरुपमा बाँच्नुहोस् । भविष्यका लागि धेरै लगानी नगर्नुहोस् । मलाई सधैँ लाग्थ्यो, भविष्यका लागि योजना र लक्ष्य बनाउनु बेकार हो । यस वर्षले मेरो वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ भन्ने सोचलाई पुनःस्थापित गरिदिएको छ ।
‘थप्पड’ तपाईंका लागि जीत साबित भयो ?
पक्कै । थप्पड मेरो लागि वर्षको राम्रो सुरुआत थियो । म निकै खुसी थिएँ । किनकि, मैले काम गर्र्नुुपर्ने राम्रो प्रोजेक्टहरु पनि थियो । तर, यो महामारीले मेरा सबै योजनाहरु छोट्ट्याइदियो । थप्पडको हल रिलिजको समय पनि छोट्ट्याइदियो । तर पनि म वर्षौँसम्म याद रहने चलचित्रको अंश हुन पाएकोमा गर्व महसुस गरिरहेको छु ।
‘थप्पड’ यस वर्षको सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको चलचित्र थियो । चलचित्रहरु आउँछन् र जान्छन् । तर, केही चलचित्रमात्रै पर्दामा लागेको समयभन्दा पनि पछिसम्म चर्चामा रहन्छन् । थप्पड तीमध्ये एक हो । मेरो लागि मेरो चलचित्रको गुणस्तर संख्याभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ ।
आगामी वर्ष म चलचित्रको चयन र आफ्नो पफर्मेन्सको गुणस्तर अझै वृद्धि होस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछु । आशा गर्दछु कि दर्शकले पनि त्यही महसुस गर्नेछन् । हरेक वर्ष म बन्द खाम ‘इनभोल्प’लाई अलि बढी धक्का दिने प्रयास गर्छु । म मेरा हरेक चलचित्रबाट नयाँ कुरा सिक्छु । र, म त्यो ज्ञानलाई मेरोपछिको चलचित्रमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दछु । यसले मलाई एक कलाकारको रुपमा बढ्न मद्दत मिलेको छ । आफूलाई निर्खानका लागि मैले छान्ने चलचित्रमा दर्शकको विश्वास हेर्न चाहन्छु । मैले जे छाने पनि उहाँहरुको पैसा र समय दुवै खेर गएन भन्ने सोचोन् भन्ने चाहन्छु ।
के तपाईं आफ्नो फोन ९मोबाइल०मा चलचित्र हेर्न रुचाउनुहुन्छ ?
म सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो हलमा जान चाहन्छु । म यो नयाँ ‘सामान्य’ छोडेर पुरानो ‘सामान्य’मा फर्किन प्रतीक्षारत् छु । म यो महामारीभन्दा अघिको ‘सामान्य’ याद गरिरहेको छु । यद्यपि, ओटीटी प्लेटफर्मले धेरै प्रतिभाशाली कलाकारहरुलाई मौका दिएको छ, जसलाई हामीले अन्यत्र कतै पनि देखेका थिएनौँ । ओटीटीले नयाँ प्रतिभालाई हुर्कन मद्दत गरिरहेको छ ।
हरेक वर्षजस्तै धेरै उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरु छन् । मैले ओटीटीमा देखेका केही मलाई मनपरेका छन् । म पक्षपाती हुनसक्छु । तर, मैले अंग्रेजी मिडियममा इरफान सर ‘खान’ लाई हेरेर धेरै रोएँ । जसले गर्दा मैले धेरैबेर हेर्न सकिनँ । अकस्मात् बिछोड सधैँ अपत्यारिलो नै हुन्छ । जब ऋषि सर ‘कपुर’ बित्नुभएको खबर आयो, मैले विश्वास नै गर्न सकिनँ । मलाई लागिरहेको थियो कि लकडाउनपछि म घरबाहिर निस्केपछि उहाँलाई भेट्नेछु ।
त्यो समयमा मैले सबैसँग भर्चुअल भेटघाटमात्रै गरिरहेको थिएँ । त्यसैले मलाई लागिरह्यो कि उहाँ घरमै हुनुहुन्छ । मैले ऋषि सरसँग दुईओटा चलचित्रमा काम गरेको छु । तर, मैले कहिले पनि सुशान्त सिंह राजपुतलाई भेटेको थिइनँ र इरफान सरसँग काम गरेको थिइनँ ।
यदि, तपाईंसँग इच्छा ९विस० छ भने त्यो के हुनेछ ?
तपाईंको २०२१ का योजनाहरु के–के छन् ?
मैले अघि भनेजस्तै म आगामी दिनहरुका लागि कुनै पनि योजना बनाउदिनँ । यति भनिरहँदा म नयाँ प्राजेक्टमा हात हाल्नुअघि मैले गर्ने भनेर वाचा गरिसकेका कामहरु सकाउन चाहन्छु । केही उत्कृष्ट प्रोजेक्टमा मैले रमाइलो भूमिका पाउँदै छु । मेरो विश्वास गर्नोस्, ती सबै यति राम्रा छन् कि मैले ती कुनैलाई पनि नकार्न सकिनँ ।
म यति विविध चलचित्रमा देखिँदै छु कि विश्वास गर्नोस्, तीमध्ये कुनै पनि दोहोरिने छैनन् । म मेरो डायरीमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै कामहरु समावेश गर्न चाहन्छु । मलाई थाहा छ, जब म मेरो करियरमा फर्केर हेछु, तब म गर्व महसुस गर्नेछु । बलिउड हंगामाबाट ।